Tababarkaaga Tababarka Hoggaanka la soo doorto CISCO | ITS
Ka fekerida xirfad kale, kor u kaca xirfaddaada hada jirta ama horumarinta dhabta ah ee waxbarashada, Tababarka Hoggaanka Dibadda ee CISCO ayaa ku siin kara kor u qaad wanaagsan. Waa wakhti aad fahamsan tahay in Shabakadu u muuqato inay u muuqato isbedelka caalamka IT-da. Nidaamka ugu fiican, korjoogteynta iyo dib u habeynta nidaamka, marinnada intooda badan waxay u furan tahay horumarka aagga. Shaki la'aan waxay ubaahan tahay barashada ugu wanaagsan ee barashada iyo kartida u habboon iyo in la dareemo oo la qiimeeyo oo muhiim ah ama in ka badan kuwa ugu fiican, waxaad u baahan tahay in macluumaadka muuqda ee dhismaha dib loogu noqdo; waxaad u baahan tahay Istaraatiijiyadda Guud ee CISCO ee Tababarka iyo shahaadada.
Tababarka Hoggaanka Dibadda ee CISCO waa inay suurtagal noqotaa adoo doorta mar kasta oo loo galo fadhiyada fasalka ama xataa raaxada gurigaaga. Halkaan waxaa ku xeel dheer adiga oo ku hadlaya saylayaasha. Kuwani waxay ku hadli karaan kuwa aadka u khibrad badan oo kugula kormeeri kara koorsada adigoo siinaya taageero isku dheelitiran iyo qiimeyn horey loo sii wado Laga soo bilaabo jihada iyo tababarka awoodda adag si loogu diyaar garoobo sida ugu macquulsan ee loo baahan yahay iyo kuwa la xariira, waxaad la kulmi doontaa hage la hagaajiyey oo kugu wajihi doona inaad wajahdo oo aad gashid adkaanta adag ee adduunka khubarada ah.
Waa maxay faa'idada la soo dhaafay?
Macallimiintaani waxay barteen fikradda fikradda ah waxayna ku xirantahay xaaladaha dhabta ah ee adiga kugu habboon.
Tani waxay ku takhasusay xirfadahan si deg-deg ah si ay u fahmaan baahidaada oo ay ku siiyaan baahidaada.
Iyada oo ay ku jirto xog aan macquul ahayn ee macluumaadka si looga dhigo gobolladaas gaaban, tababare hibo leh ayaa kaa caawinaya inaad ku daboosho alaabta koorsada gudaha iyo dibadda oo aad u sameysey imtixaanka si fiican gudaha waqtiga.
Marka iyo ballaadhan, shaqaale khibrad leh oo xirfad leh, tababar xirfadeed ayaa tan ku sameeya gudaha iyo dibedda; kaa caawinaya inaad kordhiso macluumaad khaas ah iyo sameynta bandhigga.